Washington”Madoonayno dagaal lala galo Waqooyiga Kuuriya” – Radio Muqdisho
Washington”Madoonayno dagaal lala galo Waqooyiga Kuuriya”
Antonio Guterres oo ah Xoghayaha Guud ee Jimciyadda Qurumaha ka dhexeysa ayaa sheegay in loo baahan yahay in arrinta Kuuriyada Waqooyi lagu xaliyo qaab diblomaasiyadeed,si looga fogaado suurogalnimada dagaal dhaca.
Hadalka Xoghayaha guud ee QM Mr Gutrerres ayaa ka dambeeyey kadib kulan ay goluhu kuyeesheen magaalada Newyorka ee xarunta QM,wuxuuna intaasi ku daray in si hoos loogu dhigo halista ah in muranka Kuuriyada Waqooyi uu noqdo mid dagaal horseeda si degdeg ah loogu baahan yahay in qaab diblomaasiyadeed lagu xaliyo muranka.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey oo la hadlayay xubnaha Gollaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa xusay in cawaaqib musiibo ah ay yeellan karto haddii aan laga hortagin halista dagaal dhaca.
Dhanka kale Rex Tillerson Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa isna u sheegay Golaha Qaramada Midoobey in Mareykanka uusan doonayn dagaal uu la galo Kuuriyada Waqooyi,isagoo xusay Mr Tillerson in tillaabooyiin dhowr ay Mareykanka miiska u saaran yihiin si ay isu difaacaan.
War ka soo baxay Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa shaki lagu geliyayay in Gantaalada Kuuriyada Waqooyi aysan halis ku ahayn Mareykanka.
Dad Soomaali ah oo lagu dilay rabshado ka dhacay Dalka Itoobiya